ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ဆီးချိုတွေတက်နေခဲ့ရင်.... - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဧပြီ 22, 2019 Assoc. Prof. Boonsri Chanrachakul, M.D.
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ဆီးချိုတွေတက်နေခဲ့ရင် … ဆီးချိုရောဂါကို ကလေးမမွေးမချင်း ဘေးကင်းစွာ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
“ဆီးချို” ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ အားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားပါ။ ဘာလို့ဆို ဒီရောဂါက ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်း အဖြစ်များ တဲ့အတွက် ပေါ်ပြူလာရောဂါတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်နေတာကိုး။ ဆီးချိုဆိုတာ .. ကိုယ်တွင်းမှာ သွေးအချိုဓာတ်တွေ အဆမတန်မြင့်မားလာပြီးတော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အချိုဓါတ်မှန်သမျှကို ခန္ဓာကိုယ်က ကုန်စင်အောင် အသုံးမပြုနိုင်တော့လို့ ဖြစ်လာတဲ့ ဖောက်ပြန်မှုပါ။ ကိုယ့်ဆီမှာ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ပမာဏတွေ အချိန်အကြာကြီး မြင့်တက်နေမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဓိကကျတဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းဆီချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများမှာ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နေရင်တော့ အင်မတန်မှ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ဆီးချိုဟာ ကိုယ်ဝန်မရှိခင်ကတည်းက ရှိချင် ရှိနေနိုင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ပို ဆိုးလာတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆီးချိုဟာ သူ့ဟာသူ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ရှိရှိ၊ ဘာကြောင့်ပဲ ရှိရှိ အဲဒါက ကိစ္စမရှိသေးဘူး။ မိခင်လောင်းနဲ့ မမွေးသေးတဲ့ ကလေးလေး အတွက်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စရှိလာပြီလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပါပဲ။ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဆီးချိုရောဂါ ဘယ်လို ဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
တကယ်တော့ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ ဦးတည်နေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကလည်း များစွာရှိနေပါတယ်။ ၁။ မျိုးရိုးဗီဇ – ဆီးချိုရောဂါမျိုးရိုးရှိခြင်း။ ၂။ အသက်အရွယ် – အမျိုးသမီးတွေဟာ ၃၅နှစ်ကျော်လာတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ် မြင့်မားလာပါတယ်။၃။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းရာဇဝင် – ကိုယ်အလေးချိန် ၄ကီလိုအထက်ရှိတဲ့ ကလေးမျိုး မွေးဖွားခဲ့ဖူးခြင်း၊ မွေးရာပါနှလုံးရောဂါ ကလေးငယ်များမွေးဖွားခဲ့ဖူးခြင်း၊ ကလေးပျက်ကျဖူးခြင်း၊ ဒါ့အပြင် အဝလွန်ခြင်း၊ သွေးတိုးရှိခြင်း စတဲ့ အချက်များကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဆီးချို ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိလာနိုင်ပါသည်။ ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်းမှာ ဆီးချိုကြောင့် မိခင်ရော ကလေးပါ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေမှာ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်မြင့်မားနေပါက ဆိုးကျိုးများမြောက်မြားစွာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း။ ဒါ့အပြင် မျက်လုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်များ နှင့် ကျောက်ကပ်များ ယိုယွင်းခြင်းတို့လည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သန္ဓေသားမှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ
မိခင်လောင်းမှာ သွေးတွင်းအချိုဓာတ် မြင့်တက်ခြင်းခြင်းဟာ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းရှိ ကလေးငယ်ကိုပါ ထိခိုက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ပုံမှန်ထက်ကြီးနေခြင်းဖြစ်ပြီး ဒါဟာ မွေးဖွားရာမှာ အန္တရာယ်ရှိသောအခက်အခဲတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပျက်ကျနိုင်ချေရှိခြင်း၊ အသေမွေးဖွားခြင်း စတဲ့ အခြေအနေမျိုးကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ မွေးဖွားပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကလေးငယ်တွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ တခြား ဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ အန္တရာယ်တွေကတော့ သွေးချိုကျခြင်း၊ အသားဝါခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေအနေနဲ့ ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို ဘယ်လို လျှော့ချကြမလဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလမှာ သွေးချို ပမာဏကို ထိန်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၂၄-၂၈ ပတ်မှာဆိုရင် ဆီးချိုစစ်ဆေးခြင်းများကို ဆရာဝန်နဲ့ ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလပိုင်းတွေမှာ ရက်ချိန်းကိုမကြာခဏသွားရပါမယ်။ ဒါမှ မိခင်ရော ကလေးပါ ကျန်းမာစေဖို့ လိုအပ်တာတွေကို ဆရာဝန်က စစ်ဆေးချင့်ချိန်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးစစ်တယ်ဆိုတာ သွေးထဲကသကြားဓာတ်ပမာဏကို စစ်ပေးတာဖြစ်ပြီး ဒီလို စစ်မှသာ လိုအပ်လာရင် ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုကို ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုရင် မေမေဖြစ်တော့မယ့်သူတွေအနေနဲ့ အစားအသောက်ကို ဆင်ခြင်ရပါမယ်။ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကို လုပ်ရပါမယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကျန်းမာရေးနှင့်သင့်တော်တဲ့ အစားသောက်ကောင်းတွေကို ရွေးချယ်စားသုံးတတ်ဖို့ပါပဲ။ အသားဓာတ် (ပရိုတိန်း) ပါတဲ့ အစားအစာ တွေကို ပိုမို စားသောက်သင့်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ပိုမို စားသုံးခြင်းဖြင့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် စားသုံးခြင်းကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အချိုဓာတ်ကဲတဲ့ အသီးအနှံတွေကိုလည်း လျှော့စားသင့်ပါတယ်။ well-balanced body လို့ခေါ်တဲ့ မျှတတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်အောင် ထိန်းညှိထားဖို့အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလို ထိန်းညှိထားတာတောင် အခြေအနေပိုဆိုးလာခဲ့ရင် ဆရာဝန်ဆီကို အမြန်သွားဖို့လို ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆီးချိုထိန်းတဲ့ အင်ဆူလင် ဆိုတဲ့ ဆေးကို လိုအပ်သလို ထိုးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ဆီးချိုတွေတက်နေတယ်… ဆိုတာ မိခင်ရော ဗိုက်ထဲက ကလေးငယ်အတွက်ပါ အန္တရာယ်ရှိတာမို့ အထူးသတိထားသင့်သောအခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေကနေ လျှော့ချပေးနိုင်တာမို့လို့ “မိခင်ကလေး ကျန်းမာရေး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆီးချိုဂရုစိုက်ပေး” လို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ဆီးချိုတွေတက်နေခဲ့ရင်.... “ဆီးချို” ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ အားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားပါ။ ဘာလို့ဆို ဒီရောဂါက ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်း အဖြစ်များ တဲ့အတွက် ပေါ်ပြူလာရောဂါတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်နေတာကိုး။ ဆီးချိုဆိုတာ .. ကိုယ်တွင်းမှာ သွေးအချိုဓာတ်တွေ အဆမတန်မြင့်မားလာပြီးတော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အချိုဓါတ်မှန်သမျှကို ခန္ဓာကိုယ်က ကုန်စင်အောင် အသုံးမပြုနိုင်တော့လို့ ဖြစ်လာတဲ့ ဖောက်ပြန်မှုပါ။
User rating: 4.71 out of5with7ratings